Afhayeenka AMISOM oo Madaxda Dowlada KMG ah kula taliyay in ay Isku xirnaanta uga daydaan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. | Halganka Online
Afhayeenka AMISOM oo Madaxda Dowlada KMG ah kula taliyay in ay Isku xirnaanta uga daydaan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Taliska Ciidamada Shisheeye ee AMISOM ayaa markii ugu horaysay bilaabay in ay dib u habayn ku sameeyaan madaxda dowlada KMG ah ee kala daadsanaanta iyo Musuq maasuqa hareeyay.
Siminaar shalay magaalada Muqdisho lagu qabtay ayaa lagu sheegay in ladoonayo in lamideeyo hadalada ay madaxda DKMG ah ka jeediyaan Warbaahinta gudaha iyo Dibadda.
Saraakiisha AMISOM oo dhibsaday kala hadalka wasiirada DKMG ah iyo saraakiisha ayaa soo qaban qaabiyay aqoon isweydaarsi loogu magac daray midaynta Codka Dowladda oo ah arrin fadeexad ku ah dowlada shariifka.
Afhayeenka ciidamada AMISOM Bregiye Behuko oo hadal ka jeediyay siminaarkii toosinta ahaa ee loo qabtay madaxda DKMG ah ayaa sheegay in loo baahanyahay isku xirnaan dhanka hadalka ah oo ay muujiyaan madaxda dowlada KMG ah isagoona ku dhaliilay wasiirada dowladda in ay saxaafadda gudaha iyo tan dibadda uga hadlaan qaab aan xil kas ahayn.
Saraakiil Mareykan ah oo iyana goobta ku sugnaa ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin in lamideeyo codka madaxda DKMG ah oo bilihii lasoo dhaafay saxaafadda uga hadlayay sidii Hogaamiye Kooxeedyadii Muqdisho oo kale.
“ma ahan in madaxda dowladu saxaafadda uga hadlaan qaab aan wanaagsanayn AMISOM way soo dhawaynaysaa in lamideeyo codka Dowlada”ayuu yiri Bregiye Behuko.
Daahir Maxamuud Gelle Iyo Janaqow ayaa dhawaan siyaaba is khilaafsan uga hadlay saxaafadda taas oo ka caraysiisay AMISOM, Janaqow oo DKMG ah ugu magacaaban Wasiirka Cadaalada ayaa sharci darro ku tilmaamay Idacadda AMISOM ee Bar-kulan wuxuuna sheegay in ay tahay Idaacad Gumaysi oo ladoonayo in shacabka lagu marin habaabiyo islamarkaana aysan wax ka ogeyn DkMG ah.
Saacado kadib waxaa isna saxafadda lahadlay Daahir Maxmuud Gelle oo sheegay in Wasaaradda warfaafintu ay ruqsad siisay idaacadda AMISOM ee Bar-kulan markii hadaladaasi is khilaafsan kasoo bexeen wasiirada DKMG ah ka wada tirsan ayay caroodeen saraakiisha AMISOM ee Idaacadooda gumaysi lagu sheegay.
Xoogaga Mujaahidiinta Shabaab iyo Xisbul Islaam ayaa Dowlada KMG ah uga wanaagsan dhanka isku xirka iyo abaabulada dagaal taas oo ay ka masayreen saraakiisha ciidanka shisheeye ee xoogga ku jooga Muqdisho oo saaxibadood DKMG ah ay kala daadsanyihiin.
« Mujaahidiinta Xarakada Al Shabaab oo Goordhaw la wareegay Gacan ku haynta magaalada Matabaan Gobalka G/gaduud iyo Murtadiintii oo kala Firxaday. Shariif Sheykh Axmed iyo Odayaal katirsan Beesha Mudulood oo is khilaafsan kadib xilka qaadis lagu sameeyay maareeyaha Dekadda Muqdisho. »